Fikradaha akhris-qorista ee lagu qiimeeyo Fasalka Koowaad waxaa ka mid ah:
Akhrinta Suugaanta iyo Qoraallada Macluumaadka ah
Ardaydu waxay muujiyaan awooda ay uga fekeraan akhriska
Weydiinta iyo ka jawaabida su'aalaha ku saabsan faahfaahinta muhiimka ah ee qoraalka
Dib-u-soo-celinta sheekooyinka caanka ah, oo ay ku jiraan faahfaahinta muhiimka ah; aqoonsashada mawduuca ugu muhiimsan dibna u sheeg faahfaahinta muhiimka ah ee qoraalka.
Aqoonsiga jilayaasha, dejimaha, iyo dhacdooyinka waaweyn ee sheeko; oo sharraxaya xiriirka ka dhexeeya laba shaqsi, dhacdooyin, fikrado, ama qaybo macluumaad ah oo qoraal ah.
Magac bixinta qoraaga iyo sawirhayaha sheeko iyo qeexida doorka midkasta ka leeyahay sheegida sheekada; kala soocida macluumaadka ay bixiyeen sawirada ama sawirada kale iyo macluumaadka ay ku bixiyeen ereyada ku jira qoraalka
Isbarbardhiga iyo isbarbar dhigga xiisaha iyo waaya-aragnimada jilayaasha sheekooyinka caanka ah; garashada isku ekaanshaha aasaasiga ah iyo farqiga u dhexeeya laba qoraal oo isku mowduuc ah.
Ardaydu waxay curiyaan fikradaha noocyadan soo socda
Qaybaha fikradaha ee ay ku soo bandhigaan mowduuca ama magaca buugga ay wax ka qorayaan, sheegaan ra'yi, soo bandhigaan sababta fikradda, iyo inay siiyaan xoogaa dareen ah xirnaansho.
Qoraallo macluumaad / sharraxaad ah oo ay ku magacaabaan mowduuc, soo bandhigayaan xaqiiqooyin ku saabsan mowduuca, isla markaana bixinaya xoogaa dareen xiritaan ah.
Qoraallada sheeko xariirta ah iyo kuwa kale ee hal abuurka leh oo ay ku sheegayaan laba ama in ka badan oo munaasabado isku xigxig ah oo isku xigxigay, waxaa ku jira faahfaahinta qaar ee ku saabsan waxa dhacay, adeegso erayo ku meel gaar ah si ay u muujiyaan amarka dhacdada, waxayna siiyaan xoogaa dareen ah xirnaansho.
Hadal, Dhageyso, Luqad
Ardaydu way awoodaan
Kaqeybqaado wadahadal wada-shaqeyn ah oo lala yeesho wada-hawlgalayaasha kala duwan ee ku saabsan mawduucyada fasalka 1 iyo qoraallada lala yeesho asxaabta iyo dadka waaweyn ee kooxaha yaryar iyo kuwa waaweyn.
Weydii oo ka jawaab su'aalaha ku saabsan waxa afhayeenku yiraahdo si loo helo macluumaad dheeri ah ama loo caddeeyo wax aan la fahmin.
Ku sifee dadka, meelaha, waxyaabaha, iyo dhacdooyinka faahfaahin faahfaahsan, adigoo si cad u qeexaya fikradaha iyo dareenka.
Muuji amarka heshiisyada fasalka ku habboon ee naxwaha Ingiriisiga caadiga ah iyo isticmaalka marka la qorayo ama la hadlayo.
Muuji amarka heshiisyada fasalka ku habboon ee xarfaha waaweyn ee Ingiriisiga, xarakaynta iyo higgaadinta marka wax la qorayo.
Go'aamiso ama caddee macnaha ereyo iyo weedho aan la garanayn oo macno badan leh oo ku saleysan akhriska iyo nuxurka fasalka koowaad.
Isticmaalka luqada Isbaanishka waxaa lagu qiimeyn doonaa qeybta Hadalka, Dhageyso, Luqadda ee kaarka warbixinta. Isticmaalka luqadda waxaa ka mid noqon doona labada luqadood ee lagu hadlo (wax soo saarka) iyo fahamka (soo dhaweynta ah).